Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Nepal » Ị gara ebe ọmụmụ nke Onyenwe anyị Buddha?
Akụkọ gbasara Nepal • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
dere Scott Mac Lennan
Nepal bụ ebe ọmụmụ nke Onyenwe Buddha.
Templelọ nsọ Maya Devi dị na Lumbini ga-anabata ndị ọbịa ọzọ ozugbo ihe egwu COVID-19 kwụsịrị.
eTurboNews na usoro njegharị anyị na -aga n'ihu na -echetara ụwa maka ikike njem nwere ike ịlaghachi n'oge na -adịghị anya.
A ma ama Nepal maka ịrị ugwu na njem ụkwụ mana maka onye njem na -enwechaghị mmasị, enwere ọmarịcha ịma mma, anụ ọhịa na edemede ime mmụọ na -echere gị. Lumbini bụ ihe atụ dị mkpa nke a.
Mana mara, ebe a dị ike nke ukwuu nke na nnukwu eze ukwu jụrụ agha wee were ndụ udo; Lumbini nwere ikike ịgbanwe.
Lumbini bụ saịtị UNESCO Heritage World. Enwere ume ma ọ bụ aura maka Lumbini nke ahụ enweghị mgbagha.
Emperor Ashoka wuru ihe echere na ọ bụ nke mbụ n'ime ọtụtụ “Ogidi Ashoka” ebe a mụrụ Buddha. Ọchịchị Ashoka (ihe dị ka 304-233 BC) dị ịrịba ama maka na eze a nwere nnukwu agha nke alaeze Mauryan gbanwere na Buddha na mberede, jụ agha, ma were afọ ikpeazụ nke ndụ ya kụzie udo na ụzọ Buddha.
Templelọ nsọ Maya Devi dị na Lumbini ka bụ isiokwu nke igwu ala na ndị ọkà mmụta ihe ochie na -aga n'ihu na -eme nchọpụta ọhụrụ na nke dị mkpa gbasara saịtị ahụ. N'akụkụ ebe ụlọ nsọ dị ugbu a, Ashoka Pillar a ma ama guzoro na ihe odide nke na -akọwa ebe a dị ka ebe ọmụmụ Buddha.
Na 2014, ekwuputara, Nepal na -ezube ịzụlite Lumbini, nke akpọrọ ogologo oge dị ka ebe amụrụ Onyenwe Buddha, dị ka Obodo Udo Worldwa.
Ọtụtụ na -arụ ụka na agbanyeghị mbọ dị iche iche iji gbanwee Lumbini ka ọ bụrụ "Mecca of Buddhists", a ka na -eleghara mpaghara ahụ anya ma na -achọ ijeri kwuru ijeri dọla.
Ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na nchọpụta ahụ nwere ike idozi esemokwu banyere ụbọchị ọmụmụ Siddhartha Gautama, onye ghọrọ Buddha.
Taa Lumbini na -akwado ọtụtụ ụlọ arụsị na ebe obibi nke mba iri na abụọ wuru. Ndị ama ama n'etiti ha bụ ebe obibi ndị mọnk nke Royal Thai Buddha, ebe obibi ndị mọnk Buddhist Zhong Hua. Ebe obibi ndị mọnk Cambodia, Pagoda Peace World, na ọmarịcha okpueze, ụlọ nsọ Maya Devi. Ọ dị mfe ịgagharị ogologo boulevard ahụ ma leta ha niile. Enwekwara ebe ngosi ihe mgbe ochie na puku kwuru puku ihe arụgharịrị arụpụta n'ime na gburugburu saịtị ụlọ nsọ Maya Devi.
Gburugburu akụkọ ihe mere eme na mkpa okpukpere chi nke Lumbini nwere ike bụrụ ahụmịhe akpịrị ịkpọ nkụ ime mmụọ, yabụ kpachara anya nye onwe gị oge zuru oke iji tinye ya niile.
Lumbinī bụ onye Buddha saịtị njem nsọ na Rupandehi District nke Lumbini Province na Nepal. Ọ bụ ebe, dịka ọdịnala Buddha siri dị, Queen Mahamayadevi mụrụ Siddhartha Gautama n'ihe dị ka 563 TOA.
Uzo esi aga na Lumbini?
Site na ụgbọ elu jiri ụgbọ elu nkeji iri atọ gaa Siddharthanagar na ụgbọ elu kilomita 30 site ebe ahụ.
Ụgbọ ala. Oge awa 10-11 na-akwụsị maka nri n'ụzọ
Ụgbọ ala nkeonwe 7-8 awa
Inweta ụzọ site na Hetauda na -enye nhọrọ nke nleta na Barsa Wildlife Reserve, Chitwan, ma ọ bụ ha abụọ na -aga mgbe njem site na Pokhara na -enye ohere mee nkwụsị na Bandipur obodo ahụ mara mma nke dị n'elu ugwu jupụtara na omenala Newar, wee gaa Pokhara ịga leta Phewa. Ọdọ mmiri, lee Annapurna massif. Ọ bụrụ na ị nwere oge ma chọọ ịhụ ụdị ọdịdị ihu na ihu kachasị na Nepal, were ụgbọ ala nkeonwe wee mee njem akaghị wee nweta ya n'otu njem.
N'otu oge na Lumbini enwere ọtụtụ họtel ndị mara mma na -enye ọnụ ahịa na ọrụ dị iche iche. A na -atụ aro ka ị debe akwụkwọ tupu oge ọ bụla na ebe ị bu n'obi na njem a.
A na -akwalite Nepal dị ka Isi iyi nke okpukpe Buddha.
Onye edemede/onye na -ese foto jiri ụgbọ ala nkeonwe mee njem '' loop '' na 2015.
Scott MacLennan bụ onye na -ese foto na Nepal.
Ọrụ m apụtala na webụsaịtị ndị a ma ọ bụ n'akwụkwọ mbipụta jikọtara weebụsaịtị ndị a. Enwere m ahụmịhe karịrị afọ 40 na ịse foto, ihe nkiri, na mmepụta ọdịyo.
Ụlọ ihe nkiri m dị na Nepal, Ihe Nkiri Ugbo ya, bụ ụlọ ọrụ kacha arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike iwepụta ihe ịchọrọ maka onyonyo, vidiyo na faịlụ ọdịyo yana ndị ọrụ niile nke ihe nkiri Farm ya bụ ụmụ nwanyị m zụrụ azụ.